I-tattoo yeNape: ungazisebenzisa njani ezi zoyilo | Ukuzoba
I-tattoo yeNape: ungayisebenzisa njani le uyilo
Nat Cherry | | Iitattoos ngasemva
Un umvambo wentamo inokuba sisisombululo esifanelekileyo kwiintlobo ezithile zoyilo, kuba indawo yeyona nto iphambili yokufumana okuninzi kubo esinakho.
Kungenxa yoko, kweli nqaku malunga noyilo olunokwenzeka umvambo wentamo, sihlalutya le ndawo yomzimba kwaye sijonga kuyilo olunokwenzeka olunokuba lolulungileyo ukufezekisa ezona ziphumo zibalaseleyo.
1 Malunga nobungakanani be tattoo yakho entanyeni
2 Ubume: oonxantathu, nkqo ...
Malunga nobungakanani be tattoo yakho entanyeni
Ezi ntlobo zeetattoo ziguquguquka kakhulu, kwaye zinokutshintshwa kuzo naziphi na ubukhulu onayo engqondweni, nangona kuya kufuneka uyithathele ingqalelo imeko yayo, esiza kuthetha ngayo kwinqaku elilandelayo.
Ngaloo ndlela, Gcina ukhumbula ukuba ubungakanani buya kuthatha isigqibo sokuba uza kuyibeka phi le tattoo kwi-nape, nokuba yeyiphi ngakumbi kwindawo yentamo okanye ngasemva. Umzekelo, kucetyiswa ngakumbi ukubeka uyilo lwe tattoo oluncinci kwindawo ephezulu ye-nape, kuba ngale ndlela imilo yentamo iya kubabeka. Ngokuchasene noko, iitattoos ezinkulu zingcono ezantsi, zinokude zibuyele ngasemva okanye egxalabeni.
Ubume: oonxantathu, nkqo ...
Ubume betattoo yakho entanyeni nayo iya kuthatha isigqibo ekuthatheni isigqibo kule ndawo okanye kwenye. Njengoko besesitshilo, kubalulekile ukuba ubuthathele ingqalelo ubungakanani kunye nobume bokwenza isigqibo esifanelekileyo.
Kule ndawo iiTattoo ezimileyo zime kakuhleAyisiyiyo kuphela ngenxa yentamo, kodwa ngenxa yokuba umqolo (enye indawo ngasemva komzimba wethu ukufumana ii-tatoo) uphawula umgca ohlula umzimba ube ziziqingatha ezibini. Kananjalo ngenxa yobume bendawo leyo unokukhetha ii-tatoos zonxantathu ngesiseko sijonge ezantsi.
Kodwa, njengoko besitshilo, Ziyi-tatoo eziguquguqukayo kakhulu, ke musa ukuzivalela kwezinye iifom: unokukhetha izangqa ezincinci, kuyilo olusonga yonke intamo ...
Umvambo kwi-nape ilungile ukuba ujonge uyilo olunobulumko kunye nezinto ezahlukeneyo, yinyaniso? Khawusixelele, unayo itattoo enje? Khumbula ukuba ungasixelela into oyifunayo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitattoos zivuliwe » Iitattoos ngasemva » I-tattoo yeNape: ungayisebenzisa njani le uyilo
IiBonsai tattoos, ingqokelela yoyilo kunye nemizekelo
Iitat tattoo ngombala, zinomdla kakhulu!